Madaxweyne Riyaale oo ka hadlay Muddaharaadkii ka dhacay Hargeysa, amarna ku bixiyey in la soo baadho ciddii ku lug lahayd iyo G. Deegaanka oo iska riixey eeddii Wasiirka | Somaliland.Org
April 30, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Madaxweynaha Somaliland, Daahir Riyaale ayaa ku tilmaamay khalad maamul oo ay ka faa’iideysteen wax uu ku tilmaamay “fidna-wadayaal” kacdoonkii dhimashada iyo dhaawaca sababay ee Axaddii, 27 April, ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxana uu amray Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo hay’adaha dembi baadhista inay si dhab ah u soo baadhaan ciddii ku lug lahayd arrintaas.
“Guddoomiye iyo Mudanayaal, waxa ayaan darro ahayd shalayto arrintii lama fillaanka aheyd ee ka dhacday Xaafadda Degmada Axmed Dhagax, taas oo ay sabab u ahayd go’aan aan laga fiirsan oo magacii hore ee Xaafaddu lahayd laga bedelay, kuna naf waayeen laba ruux dad badanina ay ku dhaawacmeen, oo aan ka tacsiyadaynayo inta ku dhimatay, inta wax ku noqotayna aan ilaahay uga baryayo in uu caafimaad siiyo”.
“Arrintaa oo u dhacday khalad maamul oo u baahneyd oo kaliya in la saxo, ayaa si ayaan darro ah fidno wadayaal uga faa’iidaysten. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Hay’adaha dembi baadhista, waxaan farayaa in si dhaba u soo baadhaan, si dhinacyada hawshaas ku lug lahaa, looga abaal mariyo dhibaatada ka dhalatay,” ayuu raaciyey Madaxweynuhu.
Madaxweyne Riyaale ma soo qaadin eedaynta loogu jeediyey xukuumaddiisa inay dadka muddaharaadayey u isticmaashay xoog dheeraad ah, isla markaana boolisku uu rasaas kala hortegey dadka, taas oo sababtay in laba qof ay ku dhinteen, dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Eelka kii dhigay:
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee uu Madaxweynuhu u xilsaaray baadhista arrintan ayaa isagu isla maalintii muddaharaadku dhacayba ku eedeeyey arrinta inuu masuul ka yahay Golaha Deegaanka Hargeysa, isaga oo sheegay inay arrintu ka dhalatay degmooyin cusub oo uu Golaha Deegaanku magacaabay toddobaadkii hore, isla markaana soo saaray wareegto degdeg ah oo uu ku tirtirayo degmooyinkaa cusub.
Wasiirka Arrimaha Guduhu waxa uu ku canaantay Golaha Deegaanka in aanay awood u lahayn inay degmooyin magacaabaan, iyaga oo aan kala tashan wasaaradda, waxana uu ka dalbaday inay si degdeg ah uga soo jawaabaan sida ay u dhacday arrintani.
Hase yeeshee, Golaha Deegaanka Hargeysa ayaa diidey eedayntaa uu wasiirku dusha ka saaray iyo canaanta uu u soo jeediyeyba.
Duqa Caasimadda Hargeysa, Inj. Xuseen Maxamuud Jiciir oo Isniintii shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa Isniintii ayaa sheegay in Wasiirka Arrimaha Guduhu uu ku degdegey eedayntaas, isaga oo sheegay in arrinta hadalku ka taagnaa aanay ahayn saddex degmo oo cusub oo Golaha Deegaanku go’aan gole ku magacaabay, isla markaana cod lagu ansixiyey, balse, uu hadal ka soo baxay magaca loo bixiyey mid ka mid ah saddexda degmo. Waxana uu sheegay Maayorku in magacaabista degmooyinkaa cusub lagu hambalyeeyey golaha deegaanka, ujeeddada ay ka lahaayeenna ahayd keliya maamul-daadejin ay ugu danaynayeen dadka caasimadda.
Maayorku isaga oo ka jawaabaya go;aanka Wasiirka Arrimaha Guduhu ku sheegay in uu tirtiray degmooyinkaa cusub, waxa uu yidhi, “Wasiirku wuxuu yidhi waa laalay [degmooyinka cusub]. Waxaad moodeysey wasiirku in go’aankaa uu sarajoog uun ku soo qoray”.
Waxana uu raaciyey in Go’aanka Golaha Deegaanku uu yahay soo jeedin, isaga oo sheegay in go’aamada golaha deegaanku gaadho ay u gudbiyaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ansixisa, una gudbisa xukuumadda dhexe, sidaa darteed, waxa uu sheegay in wasaaraddu ay golaha dib ugu soo celiso magaca hadalku ka dhashay si loo saxo. Waxa kale oo uu sheegay in wasiirka ka warhayey oo uu sii ogaa.
“Wasaaraddu way ogeyd, 4 cisho ka hor bay ahayd, Tv-ga iyo meel walba waa laga sheegay, maalin 5aadkii bay dhacday tan muddaharaadku, markaa wasaaradda iyo dadka oodhamiba way ogaayeen oo waatan nalagu soo hambalyaynayey,” ayuu yidhi Maayorku.
“Wasiirku haddii shalayto markii muddaharaadkii faraha ka baxay hadduu annaga nagu soo jiifsaday waa wasiirkayagii oo waxba kama qabno. Laakiin, runtu waxay ahayd in ay sheegaan in magac la diiddanaa ee aan degmo la diidanayn,” ayuu raaciyey.
Maayorku, waxa kale oo uu iskaga difaacay eedda iyo cannaanta uu Wasiirka Arrimaha Guduhu dusha ka saaray, isaga oo sheegay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha looga baahnaa inay dadka u fasaxdo muddaharaadyada oo la ogolaado inay dhacaan muddaharaadyo nabadgelyo ah, si dadku aanay sharciga gacanta ugu qaadan. Waxana uu xusay in muddaharaadku aanu ku koobnayn keliya cabashada magaca ee ay qayb ka ahaayeen arrimaha hadda dalka ka taagan ee siyaasadeed.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, mudane Cabdillaahi Ismaaciil Cali, waa markii labaad ee uu si degdeg ah cid ugu eedeeyo dhacdo nabadgelyada saamaysa, taas oo lagu beeniyo ama uu caddayn u waayo. Horraantii bishan ayuu xisbiga KULMIYE ku eedeeyey qarax ka dhacay xarunta Guurtida, taas oo uu markii dambe sheegay in ay ku waayeen wax dembi ah oo cad.